कस्तो बेलामा मेवा मुखमा पनि हाल्नु हुदैन, - यादका टुक्रा
कस्तो बेलामा मेवा मुखमा पनि हाल्नु हुदैन,
1 month ago 2422 Views
म्याग्नेसियम, पोटासियम, नियासिन, प्रोटिन र क्यारोटिन तथा डायटरी फाइबर जस्ता शरीरलाई फाइदा पुग्ने तत्वहरुले भरिएको मेवाले बेफाइदा पनि गर्छ । मेवाको सेवन कुनै समयमा शरीरका लागि निकै घातक हुन्छ । आयुर्वेदका अनुसार मेवा सेवन शरीरको लागि जति धेरै फाइदाजनक छ त्यति नै यसका नराम्रा असरहरु पनि छन् ।
गर्भवती महिलाका लागि : गर्भवती महिलाले मेवाको सेवन गर्नु हानिकारक मानिन्छ । मेवाले गर्भाशयलाई संकुचित गरिदिन्छ भएकाले यसको सेवनले गर्भपतन हुने खतरा बढ्छ । स्तनपान गराउँने महिला : गर्भावस्थामा मात्र नभई बच्चा जन्माइसकेपछि पनि मेवाको सेवन हानिकारक हुन्छ । मेवामा हुने पापेन (एबउबष्ल) नाम विषाक्त पदार्थले बच्चामा गम्भीर असर पार्दछ । त्यसैगरी, बच्चा एक वर्षको नहुँदासम्म मेवा खुवाउँनुहुँदैन ।
एलर्जी : क्यारोटेनिया नामक रोगको विरामीले मेवाको सेवन गर्नुहुँदैन । मेवामा भएको लेटेक्स नाम पदार्थले उक्त रोगका विरामीमा छालाको एलर्जी हुन्छ । ब्लड प्रेसर : मेवाले शरीरमा सुगरको मात्रा कम गराउँन मद्दत गर्छ । तर, मधुमेहसँगसँगै ब्लड प्रेसरको समस्या भएकाहरुले मेवाको सेवा भुलेर पनि गर्नुुहुँदैन । साथै, प्रेसर नियन्त्रण गर्ने औषधि सेवन गर्नेहरुले डाक्टरको सल्लाहविना मेवाको सेवन गर्नुहुँदैन ।
मृगौलामा पथ्थरी : अध्ययनका अनुसार धेरै मात्रामा भिटामिन सीको सेवनले मृगौलामा पथ्थरी गराउँछ । मेवामा पनि उच्च मात्रामा भिटामिन सी हुने भएकाले जसले पथ्थरीको समस्या निम्त्याउँन सक्छ । झाडापखलामा : पेटमा समस्या भएको समयमा वा झाडापखला लागेको समयमा मेवाको सेवन गर्दा झन् धेरै पखाला लाग्न सक्छ ।
मुटु रोग : मुटु रोगसँग सम्बन्धित समस्याबाट गुज्रिरहनुभएको छ र औषधि सेवन गरिरहनु भएको छ भने मेवाको सेवनबाट टाढा रहनुपर्छ । घाँटीको समस्या : एक दिनमा एउटाभन्दा बढी मेवाको सेवन गर्दा घाँटीमा समस्या आउँछ । यसैले जति नै उपयोगी भए पनि कुनै पनि कुराहरु अधिक रुपमा खानु भने हुदैन । मेवाको लागि पनि यो नियम भने लागू हुन्छ ।
Don't Miss it मेवाका कति धेरै गुण ? मान्छेहरु त्यहि पनि कम खान्छन्,
Up Next यी १० कुराहरु स्कुलमा सिक्छन् भनेर बस्नु हुन्छ भने तपाईका सन्तान अभद्र हुन्छन्
बिहान खालीपेटमा तातोपानीमा मह र कागती मिसाएर पिउँदा यस्ता फाइदा,
बिहान उठ्ने बित्तिकै मानिसको शारिरिक स्फूर्ति आइसकेको हुदैन भने हाम्रो मेटाबोलिज्मले पनि भर्खर मात्रै गति लिन थालेको हुन्छ । यस्तोमा…
4 weeks ago 938 Views
कोक र पेप्सी जस्ता कोल्ड ड्रिङ्स घर सफामा यसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ
कोल्ड ड्रिंक्सलाई धेरै मानिसहरुको घरमा प्रवेश निषेध गरिएको हुन्छ । मानिसले जहिलेदेखि यसको सेवन हानिकारक छ भन्ने कुरा थाहा पाए…
1 month ago 944 Views
के हुन् घरमा राख्नै पर्ने आपतकालिन उपचारमा प्रयोग हुने ११ जडिबुटीहरु ?
1 month ago 685 Views
भान्साको काममा नै दम्पतीका लागि कसरी बन्छ डेटिङको रमाइलो ?
भान्साको काममा परिवारका सबैले मिलिजुली किन नगर्ने ? श्रीमानले सागसब्जी पकाइरहँदा श्रीमतीले अचार बनाउन सक्छिन् । यसमा छोराछोरी पनि सहभागी…
1 month ago 383 Views
आलसका अचम्मै पार्ने फाइदाहरु रहेछन्, तर यसरी खानु पर्छ
आलसका बारेमा थाहा नपाउने मानिस कमै होलान्। यसको तेल निकै लोकप्रिय छ। आलसको छोप अचारमा पनि प्रयोग हुन्छ। आलसलाई बहुगुणी…
1 month ago 2275 Views
हामीकहाँ बिवाहलाई एक यस्तो बन्धन मानिन्छ, जो केवल शरीरको मात्र नभई मन र आत्माको पवित्र बन्धन हुन्छ । वैदिन संस्कृति…
2 months ago 3448 Views
सिंहासन, यो योग आसनले अनुहारको चाहुरी हटाउनदेखि टन्सिलमा समेत निको पार्छ
अहिले योगबारे कमै अनभिज्ञ छन् । योगकै एउटा आसन हो, सिंह आसन । यो आसनमा सिंह जस्तै पोजिसनमा रहेर भित्रैबाट…
सम्बन्धमा खुसी नै खुसी यी ६ कुराहरुले दिन्छन्, सँधै सम्झना गरौँ
हाम्रो जीवन यन्त्र जस्तै नियमित हुँदैछ । दैनिकीमा कतैपनि क्रमभंगता गर्ने सम्भावना छैन । दैनिक जीवन नै कार्यालय जान र…
2 months ago 332 Views